အမေးအဖြေများ | Sichuan Ideasys Precision Machinery Co. , Ltd.
အဆင့်တိုင်း၌တိုးတက်မှုထိန်းချုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ၏တိကျသောလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်တာ ၀ န်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲသုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၏အစပြုမှုကိုအခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ အကြောင်းရင်းများကိုအချိန်မီစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်မပြီးဆုံးသောသူများအတွက်ပြန်လည်ကုစားရေးအစီအမံများရေးဆွဲခြင်း အစီအစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုအစည်းအဝေးတည်ထောင်ရန် စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုသံသရာကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ node လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏အစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးပါ၊ စုစုပေါင်းစီစဉ်ထားသည့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသေချာစေရန်အချိန်မီညှိနှိုင်း။ တက်ကြွစွာထိန်းချုပ်သည်။
ပေးပို့ချိန်ထိန်းချုပ်မှုအရအပတ်စဉ်စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ပါ။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးပြီးအချိန်မီညှိပါ။ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏သမာဓိကိုသေချာစေရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်ရမည်။ စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်သောစက်ကိရိယာများပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှားပါးခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်စက်ပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုနှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏သမာဓိရှိမှုကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုရမည်။ ။ နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းစေခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီမတိုင်မီပုံဆွဲခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးရမည်။ အကယ်၍ အရည်အသွေးပြanyနာကိုတွေ့ရှိပါကလာမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမထိခိုက်စေရန်၎င်းကိုအချိန်မီပြုပြင်ရမည်။ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမှုအတိုင်းအတာအရအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းကြပ်စွာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆောက်လုပ်ရေးကာလနောက်ကျခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပါ။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ။ စာရင်းအင်းများကိုခွဲထုတ်ပါ၊ စီစဉ်ထားသည့်တိုးတက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အပတ်စဉ်စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ရမည်၊ တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းကိုပြုစုရမည်၊ တိုးတက်မှုစာရင်းအင်းဇယားကွက်ကိုဖြည့်ရမည်၊ ရှုထောင့်အားလုံးအကြားဆက်ဆံရေးကိုညှိနှိုင်းရမည်၊ အချိန်မီ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ တိကျမှုနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ရမည်။ အမျိုးမျိုးသောပlinksိပက္ခများကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ အားနည်းသောအချိတ်အဆက်များအားလုံးကိုခိုင်မာစေရမည်၊ ရွေ့လျားသည့်ဟန်ချက်ကိုသဘောပေါက်ရမည်။
1. "သုံးမျှ" ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း
အဆိုပါအော်ပရေတာချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပါဘူး; ချို့ယွင်းချက်ရှိသောထုတ်ကုန်များကိုလက်မခံပါ။ ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်များလာမည့်လုပ်ငန်းစဉ်သို့စီးဆင်းရန်ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်“ နောက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖောက်သည်ဖြစ်သည်” ၏အရည်အသွေးကောင်းအယူအဆကိုချမှတ်ရမည်။ အရည်အသွေးကောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှစတင်သည်၊ ယခုမှ စ၍ ထုတ်ကုန်ကိုတစ်ကြိမ်တည်းတွင်ပြီးဆုံးစေသည်။
2. "သုံးစစ်ဆေးခြင်း" စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း
"ကန ဦး စစ်ဆေးခြင်း" ဆိုသည်မှာထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီကုန်ကြမ်းနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းအပါအ ၀ င်ယခင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ထုတ်လုပ်သူမှလွှဲပြောင်းပေးသောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ "ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း" ဆိုသည်မှာထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ထုတ်လုပ်သူမှပြုလုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်သူမှတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သည်။ "အထူးစစ်ဆေးခြင်း" ဆိုသည်မှာဌာနအကြီးအကဲနှင့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တို့၏စစ်ဆေးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့်စက်ရုံခေါင်းဆောင်များသည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များကိုအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအခြေချရန်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေခံလည်းဖြစ်သည်။ ဖျက်သိမ်းရေးယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်သာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
ပူးတွဲဖိုင် 8D ဖိုင်ကိုကြည့်ပါ။ →
ပေးပို့နည်း ဘယ်လိုကယ်ထုတ်မလဲ ပို့ဆောင်ရေးဘယ်မှာပါလဲ
ကျနော်တို့ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုအားသာချက်ရှိသည်။ ချန်ဒူးမှဥရောပအထိရထားလမ်းအတွက် ၁၂ ရက်သာကြာသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည်။